विरामी बुवा ट्रक लिएर लामो लामो यात्रा गर्थे । बुवा घरबाट टाढा टाढासम्म पुग्थे । यसरी यात्रा गर्दा उनको साथमा हेरचाह गर्ने हुँदैनथ्यो
ट्रक ड्राइभर कति होलान् ? लाखौं लाख ।
तर उनीहरुको चर्चा छैन । एक ट्रक ड्राइभरको भने व्यापक चर्चा छ ।
उनको चर्चा किन भयो होला ? के उनले अरुले भन्दा भिन्न ट्रक कुदाए ? कि उनको ड्राइभिङ शैली फरक छ ? वा कुनै रेकर्ड पो बनाएकी ?
यी सबै अनुमान मेल खादैन । किनभने यि ट्रक ड्रइभरले यसरी चर्चा पाउनुको दुईवटा कारण मात्र छन् । एक त यि चालक युवती हुन् । २१ बर्ष उमेरकी । अर्को चाहि उनी सुन्दरी छिन् । सुन्दरी युवती भएकाले उनको चर्चा भएको हो ।
चालकहरु भनेका पुरुष हुन्छन् । सामान्य हुन्छन् । उनीहरुको रुपरंग खासै राम्रो हुँदैन भन्ने धारणाकै कारण उनी चर्चामा आएकी हुन् । उनलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर ट्रक ड्राइभर भनिएको छ ।
उनी जापानकी हुन् । जापानको कोची प्रान्तमा बस्छिन् । उनको नाम चाहि राइनो सासाकी हो । सानोमा त उनले ट्रक ड्राइभर बन्ने सोचेकी थिइनन् । उनी त नृत्य प्रशिक्षक थिइन् र विद्यालयमा नृत्य सिकाउने गर्थिन् । तर ठूलो भएपछि उनको हातमा यस्तै काम आइलाग्यो ।
उनको बुवा पनि ट्रक ड्राइभर थिए । तर बुवाले ट्रक चलाएकै कारण पनि उनी यस क्षेत्रमा आएकी होइनन् । जब बुवा विरामी भए त्यसपछि चाहि उनले बुवाको काम सम्हालनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
विरामी बुवा ट्रक लिएर लामो लामो यात्रा गर्थे । बुवा घरबाट टाढा टाढासम्म पुग्थे । यसरी यात्रा गर्दा उनको साथमा हेरचाह गर्ने हुँदैनथ्यो । बुवाको मायाले गर्दा उनी ट्रकमा बुवासँगै हिँड्न थाले । ट्रकमा यात्रा गर्दै उनले बुवाको ख्याल पनि राखिरहिन् ।
यसै क्रममा उनले विस्तारै विस्तारै ट्रक चलाउन सिकिन् ।